लगातार दुई दिन स्थिर रहेको सुनको भाउ आज तोलामा रु. ६०० घट्यो
काठमाण्डौ । लगातार दुई दिनदेखि स्थिर रहेको सुनको मूल्य बिहीबार तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुन तोलामा ६०० रुपैयाँले घटर प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७० हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि दुई सातायता ओरालो लागेको सुनको भाउ सोमबार एकदिनै तोलामा १ हजार १००...
काठमाण्डौ । सुनको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम जारी नै छ । सुनको भाउ आइतबार फेरि तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार २०० र तेजाबी सुन ६९ हजार ९०० मा कारोबार भइरहेको छ । गत साता कारोबारको अन्तिम दिन प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी...
यो साता सुन तोलामा रु. १४ सयले घट्यो
काठमाण्डौ । अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता सुन तोलामा १ हजार ४०० रुपैयाँले घटेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७२ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७१ हजार ७०० रुपैयाँ थियो। यो साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७० हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी ७० हजार रुपैयाँमा झरेको छ । समग्रमा...
- धर्म मलासी काठमाण्डौ । पछिल्लो दुई महिनायता नेपाली बजारमा बहुमूल्य पहेँलो धातु सुनको भाउ अचाक्ली भएपछि चाडपर्वको सिजनमा पनि कारोबार नगण्य अवस्थामा पुग्दा काठमाडौँका व्यवसायीहरु धरापमा परेका छन् । सुनको नगण्य कारोबारका कारण महँगा सटर लिएर बसेका व्यवसायी रुनु न हास्नुको स्थितिमा छन् । दसैँको मुखमा सटर भाडासँगै कर्मचारीलाई तलब दिने...
सुनको भाउ लगातार घट्दै, प्रतितोला रु. ७० हजार ८०० कायम
काठमाण्डौ । यो साता सुनको भाउ लगातार घटिरहेको छ । सुन तोलामा बिहीबार पनि रु २०० ले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सुन तोलामा रु २०० ले घटेर बिहीबार प्रतितोला छापावाल सुन ७० हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७० हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको स्थिर रह्यो । कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार भने...
ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, आजै तोलामा रु. ७०० घट्यो
काठमाण्डौ । गत सातादेखि नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो लाग्न थालेको छ । पछिल्लोपटक तोलाकै ७३ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेर नेपालकै इतिहास उच्च विन्दु छोएको सुनको भाउ यो साता कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार पुनः ७१ हजार रुपैयाँ झरेको छ । यसले सुनको भाउ क्रमशः घट्दै गइरहेको संकेत गर्छ । सुनको भाउ तोलामा मंगलबार एकैदिन रु. ७०० ले घटेको छ । यो साता...
सुनको भाउ घट्दै, आज पनि तोलामा रु. ५०० ले सस्तियो
काठमाण्डौ । भदौको तेस्रो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले सस्तिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल ७१ हजार ५०० र तेजाबी ७१ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा एकैदिन १ हजार ४००...
सुनको भाउ तोलामा आज एकैदिन रु. १४ सयले घट्यो, समग्रमा यो साता सुनको भाउ स्थिर
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा कारोबारको अन्तिम शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा एकैदिन १ हजार ४०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार एकैदिन १ हजार ४०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन ७२ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको भाउ बिहीबार पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा १०० रुपैयाँ घटेर...
सुनको भाउ रु. १०० ले घट्यो, प्रतितोला रु.७३ हजार ४००
काठमाण्डौ । नेपालमा बजारमा बिहीबार सुनको भाउ तोलामा रु. १०० ले घटेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनजुसार बिहीबार तोलामा रु. १०० ले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन रु. ७३ हजार ४०० र तेजाबी सुन रु. ७३ हजार १०० कायम भएको छ । हिजो बुधबार तोलामा रु. १ हजारले बढेर प्रतितोला छापावाला सुन रु. ७३ हजार ५०० र तेजाबी सुन रु. ७३ हजार २०० कायम भएको...
सुन तोलामा आज रु. ४०० ले घट्यो, कतिमा झर्यो भाउ ?
काठमाण्डौ । साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको छ । गत साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार एकैपटक १ हजार २०० रुपैयाँले बढेर किनबेच भएको सुनको मूल्यमा यो साताको पहिलो दिनै गिरावट आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन ७२ हजार रुपैयाँ र...
सुनको भाउ आज तोलमा रु. १ हजारले घट्यो, समग्रमा यो साता रु. ११ सयले बढ्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ यो साता निकै उतार बढाव भएको छ । समग्रीमा गत साताको तुलनामा यो साता सुन भाउ तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको भाउ कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार पुनः तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेर छापावाल प्रतितोला ७२ हजार ४०० र तेजावी ७२ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । योसँग भदौको साता सुनको भाउ तीन दिन बढेको छ भने...